IZINTANDOKAZI ZAKHO Connecting
Ukubhekana nokuhlukana nesithandwa sakho
Ukuhlukana nomuntu omuthandayo kungabanzima kakhulu! Ekuqaleni, kobudlelwane yonke into ibamnandi, loku kungakwenza ucabange ukuthi uzohlala nesithandwa sakho impilo yakho yonke. Kuba buhlungu kakhulu uma ubudlelwane sebuphela, inhliziyo iyaphuka, okungenza uthukuthele kakhulu. Wonke umuntu ubhekana nokuhlukana ngendlela ezihlukene. Nazi izindlela ezingakusiza ukuthi ubhekane nokuhlukana nesithandwa sakho.
Kuzilele ukuphela kwobudlelwane, akubalulekile ukuthi ubani ohlukane nomunye.
Khuluma nabangane ngemizwa yakho.
Zikhumbuze ngezinto ezinhle onazo futhi ongazipha umhlaba.
Qala wenze izinto ezizokujabulisa ngalesikhathi obusichitha nesithandwa sakho.
Funda kulesisimo. Loku kuzokisiza ukuthi uthathe ezinqumo esihlakaniphile ngokuzayo.
Qala kancane ukuvula inhliziyo ukuze uthole esithandwa esisha.
Ungazami ukuzwisa i-ex yakho ubuhlungu ngoba wena uzwa ubuhlungu!
Ungafaki amastatus okudinwa noma agcwele ubuhlungu kwi-social media - uzozisola kusasa! Uma ungazithembi ukuthi ngeke ukwenze loku, kungcono ukuthi uvele ubasuse kusocial media wakho.
Ungaphuzi noma udle izidakamizwa ngoba uthi uqeda izinhlungu. Loku ngeke kukusize, kodwa kungakufaka ezimweni eziyingozi.
Kuzobakhona izinsuku ezinzima kanye nezimnandi, isikhathi kuphela esizoqeda ubuhlungu bokuphukelwa inhliziyo. Mawuzizwa sengathi awukwazi ukubhekana nalesimo, kungcono ukhulume nomuntu imethembayo. Kungenzeka bakwazi ukweluleka ukuthi ungenzenjani.
Thola ulwazi olwengeziwe ngobudlelwano nabanye kwi-Your Peeps kuB-Wise.
< Back to IZINTANDOKAZI ZAKHO